तपाईले किन्ने तरकारी कति सस्तो ? यस्तो छ कालिमाटी बजारको मूल्य
कालिमाटी बजारमा फलफूल तथा तरकारी अन्यन्त्र भन्दा सस्तो पाइन्छ। त्यसैले खुद्रा व्यापारी मात्रै होइन उपभोक्ताले समेत यहीबाट तरकारी किनेर लैजाने गर्छन्।
कालिमाटी बजारमा सस्तो पाइने भएकाले आसपासका उपभोक्ता मात्रै नभइ टाढाटाढाबाट पनि तरकारी किन्न आउने धेरै रहेको व्यापारीहरु बताउँछन्। आफ्नो सवारी साधन हुनेहरुले त कालिमाटीमा आएका बेला प्रशस्त फलफूल र तरकारी बोकेर लैजाने गरेको बताउँछिन् खुद्रा व्यापारी रमाकुमारी खरेल। ‘खासगरी स्कुटर र मोटरसाइकल हुनेहरुले मेरोबाट धेरै तरकारी लैजान्छन्, धेरै लैजाँदा केही सस्तो दिन्छु’ उनले भनिन्।
कालिमाटी बजार हुँदै कार्यालयदेखि घरसम्म पुग्नेहरुले यहीबाट तरकारी किनेर लैजाने गरेको उनले बताइन्। बाहिर १ सय रुपैयाँको तरकारी किन्नेले कालिमाटीबाट लैजाँदा २० देखि ४० रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने उनले बताइन्।
‘बाहिर हामीले जुन पसलबाट किन्छौँ, पसलेले पनि यहीबाट लैजाने हो, उसले ढुवानी, पारिश्रमिक, सटर भाडा लगायत जोडेर मूल्य तय गर्दछ, त्यसकारण सिधै यहाँबाट किन्दा सस्तो हुन जान्छ’ उनले भनिन्।
व्यापारीलाई आफूले नै होलसेल मूल्यमा तरकारी दिने उनले बताइन्। होलसेलभन्दा खुद्रा मूल्यमा आफूले धेरै मूल्य नराखेको उनको दावी छ। ‘हेर्नुहोस् खुद्रा लैजाने भनेको मजस्तै गृहिणी, पढ्न आएका विद्यार्थीहरु धेरै हुन्छन्, तिनीहरुलाई सकेसम्म सस्तो नै दिने गरेकी छु’ खरेलले भनिन्।
आफूले बेच्न राखेको बोडी प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा दिएको उनले बताइन्। ‘यही बोडीलाई अन्यन्त्र ५५ देखि ७० रुपैयाँसम्म व्यापारीहरुले लिन्छन्, यहाँ कतै पनि ४५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन’ उनले भनिन्। उनले बेच्ने बन्दा प्रतिकेजी २५, काउली ६५, घिरौंला ४०, तितेकरेला ४५ र लोकल सानो गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकेजी ४५ रुपैयाँ रहेछ।
शनिबारका लागि कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको तरकारीको खुद्रा मूल्य विवरण हेर्नुहोस् र आफूले किन्ने गरेको कति सस्तो ? तुलना गर्नुहोस्।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २४, २०७४, ०१:३०:३४